Mogadishu Journal » Al Shabaab oo qarax la eegtay ciidamo ka tirsan Kenya
Mjournal :-Ciidamo ka tirsan booliska dalka Kenya ayaa waxaa qarax miino lagula eegtay xilli ay ku socdaalayeen degaannada dhaca xuduuda dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
Qaraxan oo si gaar ah uga dhacay wadada isku xirta deegaannada Ceelraam iyo Dabaasiti ayaa waxaa la xaqiijiyay inuu qabsaday mid ka mid ah gaari ciidan oo ay wateen booliska.
Al Shabaab oo sheegtay masuuliyadda qaraxan ayaa waxa ay tilmaameen in khasaare kala duwan ay gaarsiiyeen ciidanka booliska Kenya ee qaraxa haleelay.
Saraakiil u hadashay booliska Kenya ayaa waxa ay sheegeen qaraxan in ciidanka lala eegtay xilli ay ku guda jireen hawlgallo amni xaqiijin ah, islamarkaana hada lagu daba jiro raggii weerarkan ka dambeeyay, faah faahin intaas ka badan ma aanay bixin.
Xoogaga Shabaab ayaa qaraxyada miinooyinka ee jidka la galiyo waxa ay u dhigaan askarta Kenyanka ah ee hawlgalada ka sameeya gobolka Waqooyi Bari Kenya.